Home Brawl Stars Guide Guide & Indlela ukuwina bayilimaza Stars
On ncomo yethu yangaphambili, siye sakwazi ukuba yokugubungela kwiziseko yomdlalo kodwa oko akwanelanga yaye akazange sanelise abafundi bethu ukuba zabo okunokwenzeka ngokupheleleyo.
Ngoko ke siye sagqiba ukudala le eneenkcukacha bayilimaza Stars isikhokelo ukuqala echaza ukuba zonke iingcebiso phambili namacebo phandle apha http://newstarship.com ukuba abafundi. Nto leyo ethetha xa ugcwalisa lokuyifunda, apho kuya kubakho utshintsho esikhulu ezenzekayo umdlalo wakho yaye uya komelela ngokulula kakhulu kwaye ngcono akukho xesha. Cinga imali ixesha sakho kule nqaku ngenjongo onjalo.
iinkwenkwezi bayilimaza wadalwa kwaye epapashwe "Supercell" inkampani kwaye iyafumaneka kwi-Android kunye iOS Stores.
Ngoko enye ezingundoqo eziliqela, saba nantsi indlela Bounty. Oku kucingwa ukuba imo wadlala umdlalo okwangoku kunye neetoni abanye abadlali baye ukudlala ngayo yaye bonwabile mzuzu yonke.
Guide saqala '.
Ukuba saqala, ngoko qiniseka ukuba uya kuba nazo ezinye iinkathazo ukuba wasebenzisa kwiinkalo ezahlukahlukeneyo kulo. Kwaye ke xa uya kulawula nje lupwa ndawo babe unganqandeki.
Ezi ngcebiso nengxabano Stars alandelayo aya kuba khona phezu inxalenye ezizayo. Ngoko ke kucetyiswa ukuba ahlale ifomu kanzulu ngokupheleleyo ekunene lo mzuzu kunye phambili ngokunjalo.
I-mode yayiba 7 iimephu ezahlukeneyo zizonke. Ngamnye bezise bume eyahlukileyo kodwa zihamba imithetho efanayo. bonke Bona waziwa kakuhle ingalindelekanga kunye nemidlalo qhinga eliphezulu neentshukumo.
Landela The Strategic Plan.
Ngoko ke apha izinto ezimbalwa ukuba uyenze ukuze babe comfortablehilts kakhulu ukudlala lo imo. Ekuqaleni usebenzisa cheats bayilimaza Stars uya kuvumela nje ukuba ukufumana nakulwa kakhulu phaya.
A angaxokozeliswa namandla, kuthetha amathuba akho ukuwina uqhubeke phambili kulo mdlalo eliphezulu kakhulu ngakumbi kunesiqhelo. Ngoko ukwandisa amathuba yakho Bayilimaza Stars cheats afumane nakulwa i ngonqakrazo yethutyana nanini na ufuna.
Diving nzulu kancinci kulo play game kwi inxalenye elandelayo. Kufuneka baqonde imithetho ayidlaleki nendlela asebenza ngqo. usukelo lwakho iphambili ukubulala nakulwa abaninzi kangangoko kunokwenzeka. Kodwa ke ukuba random, kukho ulandelelwano ethile kufuneka ulandele kunye nesihamba nganye iya kukhokelela utshintsho kwiqela iingongoma zakho score.
I Mode Bounty Icacisiwe.
Le iqela indlela ukufa umdlalo; Ndiyaqonda ukuba mandiqale ukuba baziqonde ngcono phezu imo bamalungiselelo. Kufuneka ukuqokelela onke amandla akho kwaye oko kuya kuba ngcono ukuba sikwazile ukuzisa abahlobo bakho kulo mngeni. Ukubanjwa ifaniswe kunye nabadlali random kwi internet na inyathelo elifanelekileyo ukuze baphumelele. Kananjalo kufuneka ndinikhumbuza kwakhona kunye nengxabano Starscheats nendlela uya echaphazela umgangatho yokudlala lilonke.
Indlela Ukuba Kugcine?
angaxokozeliswa nganye nibulala uya kukunika isiqalo njengomvuzo. ephambili ekujoliswe wakho ukuba baqokelele iinkwenkwezi ezininzi kangangoko kunokwenzeka. inkwenkwezi nganye iya kukhokelela isongezo sika amanqaku amanqaku ewonke nje iqela. Kananjalo isikolo sakho kuza kwanda ngokunjalo kususela mzamo zonke ngolwenu ezazifanele ukuba wenze konke okusemandleni akho ukuze indlela kwisigaba esilandelayo.
Vula Zonke nakulwa Abanamandla for Free!
With the Bayilimaza Stars kugula, Silindele ukuba ukugqiba lamaphulo anikwe afumane neenkwenkwezi kwisakhelo lwexesha elinikiweyo. Isenokuba umsindo nto ingumnqa kakhulu ukubona. Kodwa unikwa kuphela imizuzu emithathu kwaye kufuneka ukuba sifeze mission lonke kwaye amanqaku amanqaku aphezulu njengotshaba kanye le wotshi tick.
Ukudlala smart yaye esazi kakuhle ukuba ukuhlasela nini nini ukuba siyinxalenye ebaluleke kangaka edabini. Oku kuya isigqibo enoba uya kude okanye, kodwa kukho nezinye izinto ezininzi ngokunjalo.